Okuhlukahlukene ku-iPhone | Izindaba ze-IPhone
Konke ngaye iPhone, Iselula ka-Apple. Lapha uzothola izindaba, izindaba, izibuyekezo zesoftware, izinsizakalo ezihambisana ne-iPhone. Sizokwazisa ngezindaba ezingaba khona ezihlobene nezinhlobo ezintsha ze-iPhone, zezinketho ezintsha ezifakiwe kwisoftware, zezinguquko enkampanini ezithinta umhlaba we-iPhone futhi konke konke okuphathelene nale divayisi, i-Apple nezinsizakalo IOS ne-iPhone.
I-Tidal yethula ukubhaliswa kwamahhala okusha futhi ithembisa ukukhokhela abaculi ngokuqondile
Por UKarim Hmeidan kwenza 1 usuku .
Imakethe yomculo osakazwayo ayikaguquki kakhulu njengaleyo yevidiyo. Ekupheleni…
Isitolo se-Apple saseCalifornia saseSanta Rosa Plaza sigetshengwa
Por UJordi Gimenez kwenza Izinsuku ze-2 .
Futhi kufanele sitshele izindaba zokuhlaselwa kwesitolo se-Apple eCalifornia, futhi ukuthi lokhu ...
Izinsiza ze-iPhone yakho namagajethi ane-HomeKit ezithengiswa ngo-Black Friday
Por U-Ignacio Sala kwenza Izinsuku ze-2 .
Ngemuva kokunikezwa kwemikhiqizo nezinsizakalo ze-Amazon kanye nokunikezwayo ku-Mac, ukuvala umzuliswano wezindatshana ...
I-Twitter ikhipha ama-akhawunti ngokungahleliwe
Por U-Alex Vicente kwenza Izinsuku ze-2 .
Isiphazamisi esixakile nesifuna ukwazi sibangela ikhanda kubasebenzisi be-Twitter ku-iOS kusukela okokugcina ...
I-Satechi Quatro Wireless, okuwukuphela kwebhethri yangaphandle oyidingayo
Por ULuis Padilla kwenza Izinsuku ze-4 .
Sihlole ibhethri langaphandle ongashaja ngalo wonke amadivayisi akho, okuhlanganisa ne-Apple Watch. Ibhethri ye-Quatro ye ...
Sihlole le shaja ekabili ye-UGREEN namakhebuli e-iPhone ne-iPad
Por ULuis Padilla kwenza Izinsuku ze-5 .
Kukhona ezinye izindlela ezisezingeni eliphezulu zamashaja nezintambo ze-Apple, ngingasho ngisho nekhwalithi ephezulu naphansi ...
I-Apple inemoto engenaso isiteringi noma ama-pedals engqondweni ka-2025
I-Bloomberg ishicilele ulwazi mayelana nephrojekthi elahliwe kaningi, yaphinde yalahlwa futhi yashiywa kabusha, i-Titan, imoto yayo ezimele….
I-Hohem iSteady X, igimbal eshibhile, ehlangene futhi ewusizo kakhulu
Sihlole i-iSteady X gimbal ka-hohem, i-compact stabilizer enenani elikhangayo nezici ezizonikeza ...
Isizukulwane sesithathu se-Amazon Echo Dot ngama-euro ayi-3
Por U-Ignacio Sala kwenza Isonto eli-1 .
Uma ubulokhu ucabanga ngombono wokuthenga isipikha esihlakaniphile okwesikhashana kodwa ungafuni ukutshala imali eningi, ...
I-Apple yenza kube lula kuwe ukuthi ulungise i-iPhone 12 noma i-iPhone 13 ngokwakho
Por UJordi Gimenez kwenza Amaviki angu-2 .
Amakhasimende afuna noma alokothe ​​alungise i-iPhone 12 yawo noma i-iPhone 13 angayenza manje ngaphandle kwesidingo ...
Sihlole izesekeli ezintsha zika-Anker ze-MagGo
U-Anker wethule iqoqo elisha lezinsiza ze-iPhone ezisebenzisa izimfanelo ezinhle zohlelo lwe-MagSafe, hhayi kuphela ...
Yini esingayilindela ku-Apple ngo-2018
Amacala e-IPhone 7 no-7 Plus ayahambisana ne-iPhone 8 ne-8 Plus
Iziphazamisi ezivame kakhulu ku-iPhone 7 nokuthi ungawaxazulula kanjani
Ungayisetha kanjani isihloli sokupela ku-iOS